सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको खुद नाफा २०.३६ प्रतिशतले वृद्धि, रिजर्बमा ९४.४० प्रतिशतको छलाङ
काठमाण्डौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा २०.३६ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ३३ करोड १७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद नाफा २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ९६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो...
सनराइज बैंकले १३% सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, खुद नाफा १५.५७%ले वृद्धि, रिटेन अर्निङमा ५७.२६%को छलाङ
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा १५.५७ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खुद...
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २२% सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, खुद नाफा १३.३४% ले वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी रु. ३१.१५
काठमाण्डौ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २२ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा १३.३४ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले २...
अधिकांश सूचकमा मेगा बैंकको छलाङ; लाभांश १३% सम्म बाँड्नसक्ने, रिटेन अर्निङमा ९२.६८% को फड्को
काठमाण्डौ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफ आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा ३०.५० प्रतिशतले बढेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकले १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा...
एनसीसी बैंकले १९% सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, ब्याज आम्दानीमा ९१% को छलाङ
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सेयरधनीलाई १९.५५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्नसक्ने देखिएको छ । यो बैंकले समीक्षा अवधिमा १ अर्ब १९ करोड वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । बैंकको सेयर प्रिमियम १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिसम्म बैंकको चुक्तापूँजी ७ अर्ब १ करोड रहेको छ ।...
नवील बैंकले ३५% सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, नाफामा ७.८४% को प्रगति
काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको टप बैंक नवील बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ३५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरणको क्षमता बनाएको छ । नवील बैंकले विगत केही वर्षदेखि नै लगातार उच्च लाभांश क्षमतासहित अधिकांश सूचकहरुमा राम्रो प्रगति गर्दै आएको छ । समीक्षा अवधिमा समेत नवीलको प्रगति जारी रहेको देखियो । यो अवधिमा नवीलले ३ अर्ब १८ करोड ४६...
साना किसान विकास लघुवित्तको खुद नाफा रु. ४९.१० करोड, जगेडामा ४१.७०%को छलाङ
काठमाण्डौ । मुख्य वित्तीय सूचकमा सन्तोषजनक प्रगति गर्दै साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा २४.९२ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४९ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको...
गरिमा विकास बैंकले १६% सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, खुद नाफामा २६.३२% र रिजर्बमा २५.२८% को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १६ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले ४५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफ आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा २६.३२ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ५९ करोड २२ लाख रुपैयाँ...
काठमाण्डौ । प्रमुख वित्तीय सूचकमा सन्तोषजनक प्रगति गर्दै लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । वितरणयोग्य मुनाफा र रिनेट अर्निङबाट उक्त लाभांश वितरणको क्षमता बनाएको हो । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफ आर्जन...
सिर्जना फाइनान्सको खुद नाफामा १८.४६% र जगेडामा २७.४७% ले बढोत्तरी
काठमाण्डौ। सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा १८.४६ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ। चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो।...
स्वाभिमान लघुवित्तको खुद नाफामा रु. २.५६ करोडले वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी रु. ४१.७८
काठमाण्डौ । प्रमुख वित्तीय सूचकमा प्रगति गर्दै स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफा २ करोड ५६ लाख रुपैयाँले बढाउन सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा...
सिभिल लघुवित्तको खुद नाफा ४५.३०% ले वृद्धि, जगेडामा २७२.४८% को छलाङ
काठमाण्डौ । मुख्य वित्तीय सूचकमा सन्तोषजनक प्रगति गर्दै सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा ४५.३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ। चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा...
बैंक अफ काठमाण्डूले १६% सम्म लाभांश वितरण बाँड्न सक्ने, खुद नाफा ४६.७०% ले वृद्धि
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १६ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमास विवरणअनुसार बैंकले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफ आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा ४६.७० प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा...
महिला सहयात्राको खुद नाफामा १४१.१२% को छलाङ, जगेडामा ११९.४५% ले वृद्धि
काठमाण्डौ । मुख्य वित्तीय सूचकमा सन्तोषजनक प्रगति गर्दै महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा १४१.१२ प्रतिशतको छलाङ मार्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो...
निर्धन उत्थानको खुद नाफामा रु. १८ करोडको छलाङ, जगेडा २९.६६% ले बढ्यो
काठमाण्डौ । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफा १८ करोड २ लाख रुपैयाँले बढाउन सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले ५५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खुद...